Ny orinasan-kevitra # 1 antony tsy nahomby tamin'ny Search Engine Optimization | Martech Zone
Raha misy zavatra mahasosotra ahy raha resaka fikarohana Optimization, dia rehefa misy olona manohitra ny fampandrosoana na miova ny tranonkala satria izy ireo mamaky zavatra any ho any. Raha mitsoka laharana ny tranokalanao ary tsy afaka manatsara ny laharana ianao dia mila manatsara. Miala amin'ny satan'ny tranonkala noho ianao mamaky zavatra any ho any mahazo anao ny valiny marina izay anananao izao… tsy misy.
Ny antony mahatonga ny orinasa tsy mahomby amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana dia noho ny mamaky zavatra any ho any fialantsiny amin'ny tsy fihetsehana. Raha tokony hampihatra loharanon-karena amin'ny fampandrosoana sy fanandramana izy ireo, misy ny mpamorona sasany mipetraka ao amin'ny efitrano ambadiky ny fizahana ny forum Google mba hiarovana ny vinavinany izay tsy tokony hataony manatsara ny tranonkala. Mampihomehy.
Famaritana ny fanatsarana
Fihetsiketsehana, fizotrany na fomba fiasa amin'ny fanaovana zavatra (amin'ny endriny, rafitra na fanapahan-kevitra) ho tonga lafatra, miasa ary mandaitra araka izay tratra manokana: ny fomba matematika (toy ny fitadiavana ny ambony indrindra amin'ny lahasa) tafiditra ao. Rakibolana Merriam-Webster
Ny motera fikarohana dia tsy manana fitsipika na lisitra fizahana hahazoana antoka fa milahatra tsara ny tranonkalanao. Ny ekipa ao amin'ny Google dia nanolotra zavatra vitsivitsy azonao atao ary koa fitaovana sasany hanaraha-maso ny fahombiazanao. Hilazan'izy ireo ianao fa azo antoka ny findainao, alaivo antoka fa haingana izy io, alao antoka fa tsy manakana ny motera fikarohana ianao… ary manome zavatra maro azonao atao mba hanatsarana ny traikefa amin'ny fikarohana ianao - sitemap, rohy canonika, famaritana meta , alt tags, rafitra HTML, pinging, fampiasana teny lakile, hierarchy, sns…
Saingy tsy milaza aminao ny zavatra rehetra tokony hataonao izy ireo, fa manoro hevitra anao fotsiny izy ireo mba hanatsara ny tranokalanao. Noho izany, aminao ny hizaha toetra ny fampiasana sary, fampiasana video, firafitry ny tranokala, fitetezana, sns. Mba hanatsarana, mila anao ianao:
Act - midika izany fa mila manao zavatra ianao!
fitsapana - Midika izany fa mamorona metodôma na dingana ianao hizaha toetra ny fiovana.
ohatra - midika izany fa tsy maintsy refesinao ny valin'ny fanovana ataonao amin'ny tranokala hahafahanao milaza izay mandeha na tsy mandeha.
Mamaky zavatra any ho any
Misy olana roa miaraka amin'ny mamaky zavatra any ho any fialantsiny amin'ny tsy fandraisana andraikitra:
The fotoana amin'ireo torohevitra nomena dia mety ho lany daty amin'ny paikadim-pitadiavana motera fikarohana ankehitriny. Ohatra, afaka mamaky lahatsoratra mahafinaritra momba ny mpanoratra ianao… saingy tsy tohanan'ny Google intsony izany.
The loharano amin'ny toro-hevitra dia mety ho tsy ao anatin'ny sahan'asa momba ireo olana sendra anao. Angamba nomena ilay torohevitra ho an'ny tranokala orinasa, na tranokala eo an-toerana, na tranokala misy fampiasa finday avo lenta… io torohevitra io na mety tsy mandeha na mety ho laharam-pahamehana amin'ny tranokalanao.
Noho izany… manatsara ianao. Ary raha miara-miasa amin'ny orinasa matanjaka izay mitazona ny paikady SEO ianao, ny andraikitra dia miantoka anao tsy hamily azy io. Saingy manana ny traikefa ihany koa izy ireo ka tsy mila mandeha ny ekipanao mamaky zavatra any ho any.
The mamaky zavatra any ho any mila miala tsiny. Hahita antony an-tapitrisany amin'ny Internet ianao raha tsy mihetsika, fa rehefa tsy mandeha ny nataonao dia tsy afaka manantena valiny hafa ianao mandra-panaovanao fanovana. Izany no lakilen'ny fanatsarana - manohy manandrana fomba isan-karazany hahafantaranao izay mety indrindra. Aza ariana na inona na inona, raha tsy hoe, ohatra, nanolotra hafatra mazava momba izay tokony hatao na tsy tokony hatao, ohatra, i Google. Ohatra, Google dia nilaza taminao fa tsy mandoa rohy mihitsy. Aza manao izany.
Ny zavatra hafa rehetra dia misokatra ho an'ny fanatsarana. Miala amin'ny fialan-tsiny ary manomboka manatsara ny tranokalanao izao!
Tags: Mihetsika!ohatramamaky zavatra any ho anyfikarohana Optimizationfomba fikarohanafizotran'ny fanatsarana ny fikarohanaSEOfitsapana